Magacyada wadamada dhimashada iyo dhibaatada ugu badan kala kulmay cudurka COVID-19 | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Magacyada wadamada dhimashada iyo dhibaatada ugu badan kala kulmay cudurka COVID-19
Magacyada wadamada dhimashada iyo dhibaatada ugu badan kala kulmay cudurka COVID-19
Bishii December sanadkii hore waxaa caalamka ka dilaacay Viruska Corona kaasoo gabi ahaanba dunida kala xiray sidoo kalana dhaqaalihii dhulka la galay asigoona abuuray dhibaato dhaqaale aad u culus.
Hadaba tirada dhimashada caabuqa Coronavirus ee adduunka ayaa si isdaba joog ah kor ugu sii kacaya mudooyinkii ugu danbeeyay, iyadoo tirada dhimashada marka loo eego tirakoobyadii ugu dambeysay, ay kor u dhaaftay 720,000, halka tirada dadka cudurka uu ku dhacay ay gaartay 19.4 milyan.
Halkaan hoose waxaan kusoo qaadan doonaa sagaalka wadan ee dhimashada ugu badan ka dhacday;
Mareykanka ayaa haatan ugu sareeyo liiska waddamada sida weyn ay u saameeyeen faafitaanka cudurkaan, maadaama illaa iyo hadda la diiwaan geliyay in ka badan 161,000 oo qof dhimasho ah, halka tirada cudurka uu ku dhacayna ay gaareyso 5 milyan.
Kaalinta labaad Brazil ayaa ku jirto sida laga soo xigtay tirooyinkii ugu dambeeyay iyo xogtii ka soo baxday jaamacadda Johns Hopkins, qiyaastii 100,000 oo qof ayaa ku dhimatay Brazil illaa iyo hadda cudurka faafa, ayadoo 2 milyan iyo 962 kun kiisna laga diiwaangeliyay tan iyo markii uu cudurka dillaacay.
Mexico ayaa gashay kaalinta 3-aad, halkaasoo tirada dhimashada ay kor u dhaaftay 51,000, tirada kiisaskana ay gaartay in kabadan 469,000.
Dalka Ingiriiska ayaa kaalinta 4aad kaga jira liiska waddamada ugu badan ee uu cudurku aafeeyay, ayadoona ay 46,500 qof ku dhinteen, tirada kiisaskana ay kor u dhaaftay 310,000.
Kaalin 5aad waxaa fadhiso Hindiya, Fayraska Corona ayaana galaaftay nolosha 42,500, ayadoo qiyaastii 2.1 milyan oo kiisna la diiwaangeliyay ilaa bilowgii cudurka.
Talyaanigu wuxuu galay kaalinta 6aad, iyadoo in ka badan 35,000 ay dhinteen, halka ku dhawaad ​​250,000 oo kiisna uu cudurka haleelay ilaa iyo hadda.
Faransiiska ayaa kaalinta 7aad fadhiyo xili in kabadan 30,000 oo qof ayaa ku dhimatay, tirada kiisaskana ay gaartey 235,000.
waxaa ku xiga Spain oo kaalinta 8aad fadhiyo halkaas oo cudurka faafa ay ku dhinteen 28,500 oo qof, waxaana la diiwaan galiyay ​​315,000 kiis.
Dalka Peru ayaa kaalinta 9aad ku jira ayadoona tirada dhimashada ay kor u dhaaftay 20 kun, tirada kiisaskana ay gaartay in kabadan 463 kun oo qof.
Ogow heerka dhimashada iyi tirada kiisaska ay dalalka ku kala duwan yihiin, tusaale Russia kaalinta 4aad ayay ka gashay adduunka marka loo eego tirada kiisaska, ayadoona ka dambeyso Mareykanka, Brazil iyo India, waxaa la diiwaangeliyay 875,000 kiis, laakiin tirada dhimashada ee Russia kama badnayn 14,700 tan iyo markii uu dillaacay.